Fanatanjahantena BEPC Nanomboka ny sabotsy ny fanadinana
Nanomboka ny sabotsy teo ny adina ara-panatanjahantena ho an’ny fanadinam-panjakana BEPC manerana ireo fari-piadidiam-pampianarana miisa telo dia Antananarivo Renivohitra, Atsimondrano ary Avaradrano.
Tetsy amin’ny ANS Ampefiloha no nanatanterahana izany ka ny taranja lomano no nisantarana azy. Mpiadina miisa 299 no tonga nandray anjara. Nambaran’ireo tompon’andraikitra fa maro tamin’ireo mpiadina no diso safidy. Nisy tamin’izy ireo mantsy no tsy nahafehy akory ity taranja ara-panatanjahantena iray ity niampy ny andro mangatsiaka, hany ka tena sahirana vao nahavita. Ora sy minitra anefa no nenjehina. Hanomboka ny 29 jolay hatramin’ny 09 aogositra ho avy izao ny taranja ara-panatanjahantena rehetra amin’ny ankabopeny ho an’ireo mpiadina BEPC manerana ny Nosy mialoha ny hanatanterahana ny adina an-tsoratra.